Doodda Baarlamaanka Somaliland ee Furitaanka Axsaabta Siyaasadda - BBC News Somali
Doodda Baarlamaanka Somaliland ee Furitaanka Axsaabta Siyaasadda
26 Sebtembar 2010
Image caption Calanka Somaliland
Baarlamaanka Somaliland ayaa ogolaaday in ajandada kalfadhiga 13-aad lagu daro qodobbo ay ka mid yihiin in la ogolaado furitaanka ururro iyo axsaab siyaasadeed oo kale.
Ajandadani waxa loo qaaday cod, ka dib markii mudanayaasha qaar ay ku doodeen in marka hore loo bandhiyo golayaasha kale ee dawliga ah, ururrada siyaasadda, iyo kuwa xog-baadhista.
Dooddani in la fasaxo ururada iyo axsaabta siyaasaddu waxay ahayd mid in muddo ahba ka jirtey somaliland, iyada oo siyaasiyiinta iyo dadwweynaha qaar, ay qabaan inayna ahayn hab dimoqoraadi ah in 2 ilaa 3 xisbi oo qudhihi ay u tartamaan siyaasadda iyo awodda dawladnnimo. Sida awgeedna in la fasaxo ururrada iyo axsaabta siyaasadeed intaa ka horraysa doorashada golayaasha degaanka ee soo socda.
Hasse ahaatee waxa jira isna rayul-caam ka soo horjeeda dooddani oo qaba in haddii laga dhigo madaxaa-furan, in markaas ay soo bixi karaa ururro iyo axsaab xagjira oo salka ku haya qabaa'il amma diin, taasina ay keeni doonto deganaansho la'aan.
Ajandayaasha kale ee baarlamaanku ku heshiiyey in laga doodo waxa ka mid ah xeerka mushaharka golayaasha qaranka, xeerka hey'adaha aan dawliga ahyn ee NGO-yada, xeerka nabadgeyada waddooyinka, xeerka baanka dhexe iyo misaaniyadda qaranka, xeerarka komishanka xuquuqal-insaanka, iyo xeerka ciqaabta guud